China iron oxide red 110/120/130/180/190 abavelisi kunye nabathengisi | IShencai Pigment
Inkangeleko: bomvu-bomvu-bomvu-bomvu-trigonal umgubo. Zombini zendalo kunye nezinto zokwenziwa. Le yendalo ibizwa ngokuba yiSafron kwaye inesisindo esiyi-55.25. UMGANGATHO 0.4 ~ 20um. Indawo yokuNyibilika 1565. Xa itshisiwe, ioksijini iyakhutshwa kwaye ingacuthwa ibe yintsimbi yihydrogen necarbon dioxide. Ingenakunyibilika emanzini, inyibilike kwihydrochloric acid, isulfuric acid, inyibilike kancinci kwi-nitric acid kunye negwele. Inokumelana nokukhanya okuhle kakhulu, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana ne-asidi, ukumelana ne-Alkali kunye nokumelana nerusi. Ukusasazeka okuhle, umbala owomeleleyo kunye namandla okufihla, akukho kuvunywa kweoyile kunye nokuhamba kwamanzi. Ayiyityhefu. Ubuninzi boxinzelelo oluvumelekileyo emoyeni yi-5 mg / M 3.
1. Kwishishini lezinto zokwakha, lisetyenziswa ikakhulu kumbala wesamente, umbala wesamente, iithayile zesamente, ithayile yokulinganisa enamathela, ithayile yomgangatho wekhonkrithi, udaka lombala, i-asphalt yombala, i-terrazzo, i-mosaic tile, i-marble engeyiyo kunye nodonga lwe-STUCCO, njl. 2. Isetyenziselwa ukwenza imibala kunye nokukhusela izinto ezahlukeneyo, kubandakanya izinto zangaphakathi ezisekwe emanzini kunye neNdonga zangaphandle zodonga, ukutyabeka umgubo, njl. Kananjalo kufanelekile ukulungiselela ioyile esekwe kwi-oyile kunye neebhatyi eziphezulu kubandakanya i-epoxy, alkyd, Amino, njl. I-Iron Red Primer yenye yeendlela ezinqabileyo ezinomhlwa kwipeyinti ebomvu ebomvu, isindisa isinyithi esingadibaniyo. 3.Ukuba imibala yeemveliso zeplastiki, ezinje nge-thermosetting polymer kunye ne-Thermoplastic, kunye neemveliso zerabha, ezinje ngemoto yangaphakathi ityhubhu, ityhubhu yangaphakathi yenqwelomoya, ityhubhu yangaphakathi yebhayisekile, njl. I-4, yezixhobo zokugaya ezikumgangatho ophezulu, ezisetyenziswa kwizixhobo zehardware ezichanekileyo, ipolishi yeglasi ebonakalayo. Ubunyulu obuphezulu bePowder metallurgy sisiseko esisisiseko sokuveliswa kwee-alloys ezahlukeneyo zemagnethi kunye nezinye i-alloy zebakala eziphezulu. Yenziwe ngentsimbi (2+) sulphate (anhydrous) okanye i-iron oxide etyheli okanye isiseko sesinyithi ngobushushu obuphezulu okanye ngokuthe ngqo kulwelo oluphakathi.
Igama loRhwebo IREDI ENTSHA IBomvu
Isalathiso sombala Umbala obomvu 101 (77491)
Inombolo ye-CAS / i -EC No. Ngo-1309-37-1 / 215-168-2
Ukucaciswa Iziqulatho (Fe2O3) % 95
Ixabiso le-pH 5 ~ 7
Ubunzima obuthile g / cm3 5.0
Ukupakisha ukuthengisa Kwingxowa ye-25kg / ibhegi ye-1000kg ngobuninzi emva koko yenza ipallet
Okulandelayo: i-iron oxide etyheli 311/313/920